युवा पुस्तालाई केन्दि्रत गदैछ युएनए सम्मेलनले – Everest Times News
युवा पुस्तालाई केन्दि्रत गदैछ युएनए सम्मेलनले
अमेरिकामा रहेका नेपाली युवाहरुको व्यक्तित्व विकास र भावी पुस्तालाई अमेरिकी मुलधारको विभिन्न क्षेत्रमा पुर्‍याउने उद्धेस्य अनुरुप आगामी मे २६ र २७ तारिख दुई दिन डल्लास टेक्सासमा तेस्रो युनाइटेड नेपालिज एसोसियसन ( युएनएन) को सम्मेलन हुदैछ । दुई वर्ष लगातार हुदै आएको यस पटकको यो सम्मेलनको बारेमा सस्थाको सस्थापक अध्यक्ष पासाङ लामा शेर्पासग एभरेष्ट टाइम्सको लागी आङछिरिङ शेर्पाले गरेको कुराकानी ।
कहिले स्थापना गरेको युएनए ?
प्रवासमा रहेको नेपाली अमेरिकन युवा र भावी पुस्तालाई अमेरिकन मुलधारमा लैजाने लक्ष्यका साथ सन २०१६ मा युनाइटेड नेपालिज एसोसियसन -युएनए) स्थापना गरेको हो ।
कसरी स्थापना भयो यो सस्था ?
अमेरिकामा धेरै सस्थाहरु छन । प्रायजसो सवै सस्थाहरु समुदायमै केन्दि्रत भएको देखियो । तर हामी अमेरिकामा भए पनि अमेरिकन मुलधारसम्म जान सक्ने कुनै सस्था देखेन । अमेरिकामा बस्ने हामी नेपालीको अबको पुस्तालाई यहीकै परिवेश अनुसार नेपाली अमेरिकन युवालाई अघि बडाई अमेरिकाको मुलधारसम्म पुर्‍याउनका लागी यो स्थापना गरेको हो ।
यो खोल्ने सोच कहिलेबाट आएको ?
जब म सन २०१६ मा नेपाल गएको थिए । त्यतिखेर भुकम्पको पिडामा हाम्रो कैयो नेपालीले दुख भोग्नु परेको दृष्यहरु देखे । भुकम्पसंगै नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण कतिपय विरामीहरुले औषधी खाना नपाएको देखेर निकै दुख लाग्यो । मनमा हामी अमेरिकामा रहेर पनि त्यस्तो दुखमा सहयोग गर्नका लागी सस्था भएपनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यही नेपालको त्यो दुखमा साथ दिनका लागी कुनै सस्था मार्फत अमेरिकन सरकार सम्म पहुच राखेर सहयोग गर्न सक्छ की भनेर सस्था खोल्न सोचेको हो । त्यही सोच अनुसार सस्थाको शुरुवात गर्दा न्युयोर्कबाट सोनाम लामा, समिर मर्हजन, सियाटलबाट एसि शेर्पा, टेक्सासबाट गौरि जोशि र म आफु सम्मिलित टिमले यो सस्था स्थापना गरेको हो ।
यो सस्थाले अहिलेसम्म के काम गदै आइरहेको छ ?
सस्थाको मुख्य उद्धेस्य भनेकै कसरी हुन्छ अमेरिकामा रहेका नेपाली भावी पुस्तालाई प्रोत्साहण गरेर मुलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । त्यसको लागी उनीहरुको भावना अनुरुप वर्षको दुई दिने सम्मेलन गदै आएको हो । सम्मेलनमा युवाहरुलाई खेलकुद, कला मनोरञ्जनसंगै शिक्षामुलुक कार्यक्रम गरेर अघि बडाउने काम गदै आइरहेको छ ।
अहिलेसम्म गदै आएको सम्मेलनबाट कस्तो अनुभव प्राप्त भयो ?
हामीले दुई वर्ष सम्मेलन गरेर हासिल गरेको अनुभवले सवैतिरबाट सकारात्माक सल्लाह सुझाव पाएको छ । त्यस्तै सम्मेलनमा उपस्थित युवाहरुमा देखिएको उमंगले हामीलाई थप उत्साहीत बनायो । सम्मेलनले गीतसंगीतको मनोरञ्जनसंगै युवाहरुमा भएको खुवी र क्षमता देखाउन पाउदा थप जोश जागर बडेको छ । यो सम्मेलनले नेपालबाट आएको होस या यही जन्मेको नेपालीको सन्तानले सिक्ने मञ्चको रुपमा दिन पाउदा खुसी छु ।
यस पटकको सम्मेलनको आर्कषण के हो ?
यस पटकको आर्कषण बालबालिकाहरुको लागी किडस फोरममा स्पीच कन्टेक्ट, स्पेलिङ वि प्रतियोगिता, किडस लिडरसिप, इमिग्रेसन फोरम, महिला फोरम, सामाजिक लिडर फोरम, योग शिविर,काम कसरी खोज्ने बारेमा जब फेयर, विजनेस फोरममा सफल व्यवसायीहरुको अनुभव बाडने, यस पटक प्रवास भुमिमा अध्ययन गरेर सफलता हासिल गरेका अष्ट्रिलियाका सफल व्यवसायी शेष घले र जमुना घलेले आफनो सफलताको अनुभव सुनाउने भएको छ । त्यस्तै लगानीको अवसर, एजुकेसन तथा मोटिभेसन फोरमहरुको साथै साझमा सास्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । यसपटकको सास्कृतिक कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरुको साथमा गायिका अन्जु पन्त र गम्बु शेर्पाले प्रस्तुती दिने भएको छ ।
सम्मेलनमा कहा कहाबाट सहाभागीहरु आउदैछन ?
यस पटक अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरुको साथै अष्ट्रिलिया, हङकङ र नेपालबाट पनि सहाभागीहरु आउने भएको छ । त्यस्तै नेपालबाट प्रदेश नम्बर १ को मुख्य मन्त्रि शेरधन राई र पर्यटन मन्त्रि जगदिस कुस्यात पनि आउने संभावना रहेको छ ।
अर्को वर्षको सम्मेलन कहा हुन्छ ?
अर्को वर्षको सम्मेलन न्युयोर्कमा हुने योजना रहेको छ ।
अमेरिकामा लगातार दुई वर्ष देखिन नेपाली युवा केन्दि्रत सम्मेलन सफल हुनमा तपाईहरुको ठुलो हात रहेको छ । प्रवासमा नेपाल र नेपालीको हितमा खोलेको यो सस्थालाई माथि उठाउन र अघि बडाउन सधैभरिनै तपाइहरुको आशा र भरोशा रहेको छ । यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रममा तपाइहरु यस पटक पनि सवै जना आउनुस र तपाईहरुको साथ, माया र ममतालेनै यो सस्था अघि बडने छ ।